Beeni Raad ma Leh; Qorahey.com iyo Qaaxana Beentoodaada Qaraxday – Rasaasa News
Apr 21, 2010 ibrahin, Jwxo-shiil, Qaaxo
Waxay maalmahanba xaysiinaysay Qorahey.com, in ay shir isugu iman doonaan wax ay ugu yeedheen Jaaliyadaha Austaralia iyo Newzealand, taas oo waa hore ka jeedsatay kooxda Jwxo-shiil. Anaga [rasaas.com], ayaa moodaynay in arintaasi ay run tahay, waxayna rasaas.com wariyaha u jooga Australia, sugaysay bal xiliga uu dhacayo shirka la sheegay.
Rasaas.com, oo iyadu jecel in ay u soo bandhigto umada Somalida Ogadeeniya dhibaatooyinka raad gadka ah ee ay kooxda Jwxo-shiil u gaysanayso halganka ummada Somalida Ogadeeniya. Waxay dhaba gal ku samaysay waxa ka jira shirkan la sheegayo waxayna ogaatay in uusan jirin wax shir ah oo ka dhacay Australia iyo Newzealand.
Sida hore uga dhacday meelo badan oo ay kooxda Jwxo-shiil, ku sheegatay in ay shirar ku qabatay oo aan waxba uga jirin, ayey Australina uusan wax shir ah uga dhicin. Sawirada ay soo bandhigeen ayaa ah kuwo la qaaday xiliyo hore oo kala duwan, sawirka ugu horeeya ee ay dadku qabaan koofiyadaha tirada badan waxaa weeye sawir laga qaaday kulan ay yeelatay Jaaliyada South Afrika.
Midka ugu hooseeya ayaa ah mid la qaaday xiligii uu Ina-dhuubo joogay Australia. Wariyaha rasaas ee ku sugan Australia, waxaa uu xaqiijinayaa, in uusan wax shir ahi dhicin, wuxuuna aad ula yaabay munaafaqada heerka ay ka gaadheen Maxamed Ibrahin [lug-law] iyo Maxamed Ismaaciil [Qaaxo] oo iyagu hada safriya uun been boga lagu qoro iyo sawiro hore.
Waxaanu dhawaan idiin soo bandhignay bogg internet ah oo uu lee yahay wariye Faranciis ah, oo kaydsaday sawiro uu ka soo qaaday gudaha Ogadeeniya 2007, in ay boggaga Jwxo-shiil ay isticmaali jireen sawiro ay ka soo qaataan halkaas. Iyaga oo dadweynaha ugu sheega in ay yihiin sawiro cusub oo hada laga qaaday CXO, oo ay cududiisu cirka marayso.
Sidaasi si la mid ah ayey isticmaashaa qorahey iyo qaaxo, wararka ay qoraana waa been qarax ah, oo laggaga quudo qaaraan dadka degan Australia iyo New Zealand.
Kooxda Jwxo-shiil oo Weer Cad u Xidhatay Wadiifadii Dhex Martay Ururka UWSLF iyo Dawlada Itobiya